नाम सुन्दानै दुश्मनहरु काँप्ने यी विश्वका १० फाइटर विमानहरु.. « News24 : Premium News Channel
नाम सुन्दानै दुश्मनहरु काँप्ने यी विश्वका १० फाइटर विमानहरु..
एजेन्सी । विश्वको कुनै पनि दुश्मनको ताकत पत्ता लगाउन, सेनालले हमला गर्न, समुद्रमा रहेका दुश्मनहरुको जहाजलाई नष्ट गर्न, सेनाहरुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न साथमा हवाई आक्रमण गर्न यी सबै कामका लागि लडाकु विमानको प्रयोग गरिन्छ ।
यो फाइटर प्लेन देख्नसाथै दुश्मनहरु काँप्ने गर्ने गरेका समाचारमा आईरहेका कुरा हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
त्यसैले आज संसारका केही शक्तिशाली देशहरुमा खतरनाक वायुसेनाहरु छन्, जुन धेरै शक्तिशाली छन् । आज हामीले तीनै बिश्वको यी १० फाइटर प्लेनहरुको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराँदै छौं, जसको नाम सुन्नेबित्तिकै दुश्मनहरु काँप्ने गर्दछन् ।
बिश्वका १० शक्तिशाली फाईटर प्लेनहरु इस प्रकार छन्ः
१. एफ ३५-लाइटनिङ
स्टील्थ टेक्नोलोजीबाट उत्पादित एफ ३५( लाइटनिङ विमान विश्वकै खतरनाक फाईटर हो । यसले विश्वको जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो ताकत देखाउन अगाडी राख्छन् । यो फाईटर प्लेनलाई अमेरीकाले र्याफ्टर फाईटर प्लेनको अघिल्लो पुस्ताको डिजाईन अनुसार विकसित गरेका छन् ।
अमेरीकाले अहिले यो फाईटर प्लेनलाई विश्वका शक्तिशाली देशहरु जस्तै, अष्ट्रेलिया, जापान, इजरायल र दक्षिण कोरिया लगाएतका देशलाई पनि दिने भएका छन्, जसको लागि सम्झौता पनि भईसकेको छ ।
यो फाइटर बिश्वका कुनै पनि कुनामा हमला गर्नको लागि निर्धक्क भएर प्रयोग गरिन्छ । अहिले सम्म यो फाईटरलाई रोक्ने कुनै पनि अन्य फाईटरको बिकास गरिएको छैन ।
अमेरीकाले अहिलेसम्ममा यो फाईटर प्लेनको संख्या १५० वटा पु¥याईसकेको छ । यसैको फारुईटरको कारण अमेरीकाले बिश्वमा अझैं पनि आफ्नो दबदबा बनाईहरेको छ ।
पछिल्लो समय यो फाईटरलाई ध्वस्त पार्ने आधुनिक हतिरयारको खोजी पनि सुरु भईसकेको छ । तर, अहिले सम्म भने पत्ता लाग्न नसकेको बताईएको छ ।
२.टी-५०ः सुखाई पिएके(एफएः
भारत र रुसको संयुक्त प्रयासमा भारतीय र रुसी सेनाको लागि मात्रै विकास भईरहेको यो फाइटर प्लेन पाँचौं पुस्ताको लागि सबै भन्दा उन्नत फाईटर प्लेन हुनेछ । यो सिंगल सिटर र डबल सिटर दुवै श्रेणीमा निर्माण हुँदैछ । अहिलेसम्म यो श्रेणीको सिर्फ पाँच वटा मात्र विमान तयार भएको छ । जुन फाईटरको लगातार ट्रायल अझै जारी छ ।
टी(५० को नामबाट नै पश्चिमी देशहरु डराउन थालेका जनाईएको छ भने यो फाईटरको ट्रायल पास हुनेवितित्तकै भारत र रुप पुर्ण रुपमा विमानको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरिएको छ । स्टील्थ फाईटर प्लेनको रेसमा रुस पनि पहिलो पटक ब्यापक तारा माथि यो होडमा सामेल भईसकेको छ ।
तर अहिलेसम्म रुसको साथमा पनि स्टील्थ फाईटर छैन त्यसोत, टी-५० को ट्रायल सफल हुन साथै रुस र भारत पनि विश्वका कुनै पनि देशमा हमला गर्न सक्षम हुने बताईएको छ ।
३. चेंगदू जे-१०ः
चेंगदू जे-१० फाईटर प्लेन अहिलेको चीनको निकै प्रभावकारी हतियार हो । यो पाकिस्तानमा पनि ‘थंडर’ नामले चिनिन्छ ।
चेंगदू जे-१० कुनै जस्तोसुकै मौसममा पनि आफ्नो लक्ष्यअनुसार हमला गर्न सक्षम छ । यो फाइटरमा लेजर गाईडेड बमको साथमा स्याटलाईट गाईडेड बमका प्रयोगमा पनि सक्षम छ । यो फाइटरको एकै उडानमा कैयौं ठाउँहरुमा बमबारी गर्न सक्षम छ ।
चिनिया सेनासँग चेंगदू १० श्रेणीको ४०० भन्दा बढी विमान रहेको छ । जस्मा एउटा सो विमान पाकिस्तानी सेनालाई दिने बताईएको छ ।
४. डसाल्ट राफेलः
डासल्ट एवियशनको अर्को पनि विकसित यो फाइटर प्लेन फ्रान्सको अग्रणी स्ट्राइक टिमको हतियारको रुपमा छ । यो फाइटर परमाणु हमलामा पनि सक्षम छ ।
यस फाइटर प्लेनले अफगानिस्तान, लिबिया, माली, र इराकमा कैयौं पटक हमला गरीसकेको छ । यो फाइटर प्लेनमा आफ्नै राडर सिस्टम रहेको छ । यो फाइटर तीन श्रेणीमा उपलब्ध छ, जसमा सिंगल सिटर (जमिनमा हमला गर्न), डबल सिटर र राफेल एम रहेको छ ।
५.एफ-२२ रैप्टर (लकहिड मार्टिन):
लकहिड मार्टिनद्वारा निर्मीत बिश्वको सबैभन्दा बढी खतरनाक फाइटर प्लेन हो । रैप्टरको कुनै पनि रडारको पकडमा नआउने प्लेन पनि हो । जुन् छोटो समयमा बिश्वको कुनै पनि ठाउँमा हमला गर्न सक्षम छ ।
अमेरीकाको यो खास फाइटर प्लेन हो । यो फाइटरलाई अमेरीकाले कुनै पनि देशलाई दिँदैन । यो फाइटरले जमिनको नजिकैबाट र धेरै टाढाबाट समेत दुश्मनहरुलाई हमला गर्न सक्षम छ । यो धेरै महँगो पनि बताइएको छ ।
यो फाइटर ब्रिटिश सेनाको लागि निर्माण गरिएको हो । सी हरीयारको आफ्नो तेस्रो श्रेणीमा अदभुत क्षमता राख्ने यो फाइटर तेस्रो पुस्ताको लडाकु बिमान हो ।
यसै फाइटर प्लेनको भरमा ब्रिटेनले फकलीन युद्ध र दुवै खाँडी युद्धका साथै वाल्कन तनावबो समयमा हमला गरेको थियो । यो फाइटरले समुद्रबाट जमिनमा हमला गर्न सक्षम छ । साथै यसले विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पनि हमला गर्न सक्षम मानिएको छ ।
फकलीन युद्धमा दुश्मनका २० लडाकुहरु मार्न सफल भएको थियो । सी हरीयारलाई अझैं पनि भारतीय सेनाहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् । अहिले ब्रिटिश रोयल नेवीको ठाउँमा विश्वकै सबैभन्दा तेज विमान लकहीड मार्टिनको लाइटनिङ ११मा परिवर्तन गरिएको छ ।
७. युरोफाइटर टाइफुन (युरोपियन युनियन)
युरोपियन टाइफुनलाई युरोपियन युनियनको देशहरु जर्मनी, इटाली, ब्रिटेन र स्पेनले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । युरोफाइटर टाइफुन कुनै पनि स्थीतीमा काम गर्न सक्षम बहुउदेश्यीय फाइटर प्लेन हो ।
यो फाइटर प्लेनले २०११ म लिबीया हमलामा फ्रान्स र इटाली कमाण्ड सम्हालेको थियो । बिश्वमा करीब २२ वटा देशमा यो फाइटर उपलब्ध छन् ।
८.म्याक्डोनेल डगलस एफ-१५ स्ट्राइक इगलः
म्याक्डोनेल गडलस एफ(१५ स्ट्राइक इगल फाइटर प्लेन लामो समय देखि अमेरीकासहितका ४ वटा देशका विमानका रुपमा रहँदै आएको छ ।
यो फाइटरलाई निकै खतरनाक पनि मानिएको छ । यसले थोरै समायमा धेरै तहसनहस गर्न सक्छ । यो फाइटरहरु मध्येमा चौंथो पिंढीको फाइटर हो ।
यसले विश्वको धेरै अपरेशनहरुमा आफ्नो कमाल देखाउन सफल भईसकेको छ ।
एफ १५( स्ट्राइक इगल फाइटरबाट अमेरीकाले अद्दाम हुसेनको अगुवाईमा रहेको बिध्वंशलाई पनि कम गर्न सफल भयो ।
सिंगल र डबल सिटर लडाकु विमानको पाँचौं पुस्ताको विमान भारतद्वारा निर्मित हो । यो विमान पनि निकै लोकप्रिय नै छ । यो विमान पनि सर्बश्रेष्ठ विमानहरुमा सामेल भएको छ ।
यो विमानले भारत विभिन्न ठाउँहरुमा प्रयो गरिँदै आएको छ । यो फाइटरले कम समयमै दुश्मनलाई हमला गर्न सकिन्छ ।
तेजस कम उचाईमा उड्का साथै १५ मिनेटमै पाकिस्तानको कुनै पनि शहरहरुमा हमला गर्न सक्षम मानिएको छ । साथै जुनसुकै मौसममा पनि प्रयो गर्न पनि मिल्ने बताइएको छ । यो फाइटरलाई मिसाइलले पनि खसाउन नसक्ने बताइएको छ ।
स्वीडेनका लडाकु विमान ‘ग्रिपेन’ एक समयको निकै चर्चीत, लोकप्रिय लडाकु विमान हो । यो अमेरीकाको एफ.ए.(१८ सुपर हर्नेट फ्रान्सेली राफेल विमान भन्दा पनि धेरै राम्रो लडाकु विमान मानिएको छ ।
यो जस्तो सुकै परिस्थीतिमा पनि हमला गर्न सक्षम विमान हो । यो विमानले एक तर्फी विश्वमा सबैभन्दा स्पीडमा हमला गर्छ ।
साथमा यो विमानले २५ मिटरको जमिनमा पनि ल्याण्ड गर्न सक्षम छ । यो अन्य फाइटर विमानहरु भन्दा सस्तो पनि छ । (अनुवादकर्ता–सरद राईः विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा)